Does Walmart Take Samsung Pay? – Answered!
घर / सम्पर्कविहीन, भुक्तानी, samsung पे / वालमार्टले सामसु Pay्ग भुक्तान लिन्छ?
2 सामसु Pay पे को लागी परिचय
3 के वालमार्टले सामसु Pay्ग भुक्तानी स्वीकार्छ?
4 वालमार्टले किन सैमसंग भुक्तान गर्दैन?
5 वाल्मार्टको नयाँ, नवीन चेकआउट अनुभव: वाल्मार्टको स्क्यान र जानुहोस् प्रयोग गर्नुहोस्
वालमार्ट सुपरमार्केटहरू, किराना स्टोरहरू, र डिस्काउंट डिपार्टमेन्ट स्टोरहरू विश्वको सबैभन्दा ठूलो अपरेटर हो। स्याम वाल्टन पहिलो पटक १ 1945। In मा शुरू भएदेखि यिनीहरूको वृद्धि भएको छ। आज, वालमार्टसँग २ 10,500 देशहरूमा १०,2,200,000०० भन्दा बढी स्टोरहरू र २,२००,००० कर्मचारी छन्।
वालमार्ट यसको कम मूल्य र ठूला स्टोरहरूको लागि परिचित छ। संभावनाहरू छन् तपाईंले राम्रो मूल्यमा के चाहानुहुन्छ फेला पार्नुहुनेछ। भर्खर सम्म, तिनीहरू पनि सम्पर्क रहित भुक्तान विकल्प को एक किसिम को स्वीकार को लागी परिचित थिए। के भयो? पढ्न जारी राख्नुहोस्।
सामसु Pay पे को लागी परिचय
सैमसंग भुक्तानी एक सजीलो गर्न को लागी, सम्पर्क रहित भुक्तान विधि हो जुन तपाईको सामसु smartphone स्मार्टफोनको साथ काम गर्दछ। जब स्टोरहरूले यसलाई स्वीकार गर्दछन्, तपाइँले अब लामो समयसम्म तपाइँको वालेट वा पर्स बोक्नुपर्नेछ। तपाईं यसलाई व्यक्तिमा स्टोरहरूमा, अनुप्रयोगहरू मार्फत, वा वेबमा प्रयोग गर्न सक्नुहुनेछ। यो तपाइँको भुक्तानी गर्न को लागी एक सुरक्षित, सुरक्षित तरीका हो। परिवर्तनका लागि पर्खने दिनहरू वा क्रेडिट कार्ड रिडर प्रयोग गर्ने दिनहरू भयो जुन हजारौं अन्य फोहोर कार्डहरू पहिल्यै भइसकेका छन्। सामसु Pay्ग भुक्तान: आधुनिक विश्वको लागि आधुनिक भुक्तान विधि।
तर के वालमार्टसँग स्यामसंग पे छ?
के वालमार्टले सामसु Pay्ग भुक्तानी स्वीकार्छ?
होईन, वालमार्टले सामसु Pay्ग भुक्तान लिदैन। वालमार्ट कार्यकारीका अनुसार भविष्यमा उनीहरूले वालमार्ट स्टोरहरूमा फेरि प्रस्ताव गर्ने योजना छैन। यो सहि छ, तिनीहरूले यसलाई लिन सक्थे जब सम्म तिनीहरूले सैमसंग पे रोक्न निर्णय गरे, जानाजानी।
यदि तपाईं सामसु Pay पे प्रयोग गर्नुहुन्छ भने तपाईं सम्झन सक्नुहुन्छ वालमार्टले विगतमा सामसु Samsung्ग पे लिइरहेको थियो। दुर्भाग्यवस, त्यो समय बितेको छ। वालमार्टले उनीहरूको भुक्तानी प्रणालीलाई 'अपग्रेड' गरेको रूपमा अधिक स्टोरहरूले डरलाग्दो 'वालमार्ट +' रसिद जारी गरे जुन एउटा निश्चित संकेत हो कि स्यामसंग पे यस स्टोरमा अब स्वीकार गरिएको छैन। अब 'अपग्रेड' लगभग सकिएको छ, वालमार्टमा सामसु Pay पे पनि छ।
यहाँ एक वार्तालाप छ कि सामसु Pay पे अब वालमार्ट मा स्वीकार्य छैन।
नयाँ परिवर्तन? वालमार्टमा सामसु Pay्ग भुक्तान अस्वीकार गरियो बाट SamsungPay
वालमार्टले किन सैमसंग भुक्तान गर्दैन?
के तपाईं दिनहरू मन पराउनुहुन्छ जब वालमार्टले स्यामसंग पे स्वीकार्यो र उनीहरू किन यो लिदैनन् भनेर अचम्म मान्दछन्?
वालमार्टले सामसु Pay्ग पे लिन बन्द गर्नुको कारण सरल छ: वालमार्टसँग सामसु Pay पेको आफ्नै संस्करण छ जसलाई वालमार्ट पे भनिन्छ। तिनीहरू तपाइँको वालमार्ट पे सम्पर्कविहीन भुक्तानी विधि प्रयोग गर्न चाहन्छ जब तपाइँ वालमार्टमा किनमेल गर्दै हुनुहुन्छ, एक प्रतिस्पर्धीको होइन।
मलाई लाग्दैन सैमसंग पे ब्लक गर्नु वालमार्टको अंशमा स्मार्ट चाल हो। वालमार्ट पे वा वालमार्ट अनुप्रयोगको तुलनामा धेरै पसलहरूले सामसु Pay पे प्रयोग गर्छन्, जसले उनीहरूको सम्पर्कविहीन भुक्तानी ग्राहक आधारलाई संकुचित गर्दछ। औसत सैमसंग पे शपर भनेको ठीक शपर वालमार्ट चाहिन्छ र उनीहरूको स्टोरमा चाहिन्छ त्यसैले स्यामसंग पे स्वीकार गर्दा वालमार्टले एक विन-विनको रूपमा हेर्नुपर्दछ।
यसको सट्टामा, तिनीहरू वालमार्ट-मात्र मोबाइल भुक्तानी प्रणालीको साथ गएका छन् जुन उनीहरूको पसलहरूको लागि जीवनलाई जटिल बनाउँदछ जो सामसु Pay पे प्रयोग गर्न चाहान्छन्। वाल्मार्ट पेले उनीहरूलाई पैसा र शपरहरू गुमाउँदैछ भनेर निर्णय नगरुन्जेल उनीहरूले सामसु Pay्ग भुक्तान स्वीकार नगर्ने आशा नगर्नुहोस्। यो केहि समय हुन सक्दछ किनभने यसमा वालमार्टमा काम गर्ने व्यक्तिहरूलाई उनीहरूले बाहेक भन्दा स्यामसंग पे संग अझ राम्रो गर्ने छन् भनेर स्वीकार्न कठिन छ।
वाल्मार्टको नयाँ, नवीन चेकआउट अनुभव: वाल्मार्टको स्क्यान र जानुहोस् प्रयोग गर्नुहोस्
यद्यपि वालमार्टले सामसु Pay पेलाई समर्थन गर्दैन, तिनीहरू अरूमा नवीन छन्। तिनिहरू सक्रिय रूपमा तपाइँको वालमार्ट शपिंग अनुभव reimaging मा काम गर्दै छन्।
वालमार्टको स्क्यान जाँच गर्नुहोस् र आफै बाहिर जानुहोस्! यो सामसु Pay पे हुन सक्दैन, तर यसले वालमार्टमा किनमेल राम्रो गर्दछ।
अनुप्रयोग आधारित भुक्तानसम्पर्क रहित भुक्तानSamsungsamsung paywalmartवालमार्ट अनुप्रयोगवालमार्ट किराना अनुप्रयोगवालमार्ट भुक्तानवालमार्ट स्क्यान र जानुहोस् सम्पर्कविहीनभुक्तानीsamsung पे